people Nepal » कसले हान्दै छ बम ? कसले हान्दै छ बम ? – people Nepal
काठमाडौँ, १४ मंसिर । गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उपस्थित कांग्रेसको चुनावी सभालाई लक्ष्य गर्दै गत मंगलबार दाङमा गराइएको बम विस्फोटमा परी घाइते भएका म्यादी प्रहरी विनोद चौधरीको बुधबार बिहान उपचारक्रममा मृत्यु भयो । देउवाले सम्बोधन गर्दैगर्दा नजिकै भएको विस्फोटमा चौधरीसहित नौ प्रहरी घाइते भएका थिए ।
विस्फोटन गराउँदै हिँड्ने समूह बलियो र राज्यचाहिँ उनीहरूको अगाडि निरीहझैँ बनेको छ । सुरक्षाकर्मीकै ज्यान जाने गरी भएका यस्ता घटनामा संलग्नको पहिचान गर्न नसक्नु र ‘अनुसन्धान हुँदै छ’ भन्ने ओठे जवाफ मात्रै दिइनु गम्भीर विषय हो ।